मैले धेरै समाचारमा पढे र सुने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटबाट एउटै ठाउँ पुग्न दुई फरक फरक सडक खनियो भनेर आलोचना गरेको । सायद समाचार लेख्ने र रिपोर्टिङ गर्ने नै दोषी रहेछन् । यो कुरा हो विकट हिमाली जिल्ला बझाङको, कथा हो खप्तडगाउँपालिका वर्डा नं. ६ को ।
देशमा संघीयता लागु भयो, गाउँगाउँमा सिहंदरबारको अवधारणा आयो सोही अनुरूप गाउँको विकासले गति अघि बढायो । चुनावको बेला गाउँ गाउँमा गइयो जनताका समस्याहरू बुझियो र केही भोगियो पनि । नेता समाजसेवी हुन झुटबोल्न आउँदैन । सोही चुनावका बेला जनतालाई दिईका आश्वासन पुरागर्न भनेर सडक खनियो दुईवटा भयो कारण थियो गाउँपालिका र प्रदेश चुनावमा दुई फरक फरक दलले जित्नु ।
त्यति मात्र होइन चुनावका बेला बयाना, बडाकोट जाँदा बाटो एउटै थियो, धेरै जनाले चुनावी प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने भिड भयो । अहिले जनताको सहजता र आगामी चुनावमा भिडभाड तथा ट्राफिक जामको समस्या भोग्नु नपर्ला भनेर नै सडक खनियो । अनि समस्या नभोगि लेख्ने पत्रकारलाई थाहै भएन त्यो भिडको व्यथा । बाटो भिरालो छ, चिप्लो छ जामहुन सक्छ, तराई तथा सहरका जस्तो ४–६ लेनको सडक खन्न सकिँदैन ।
जनताको करको सदुपयोग गरि जनताकै लागि दुइवटा सडक निर्माण गरियो के यो गलत हो ? सररर जताबाट गए नि हुने , जाम पर्दैन, सडक कहिल्यै पनि अवरुद्ध नहुने, एउटा सडक अबरुद्ध भए अर्को सुचारू हुने, कहिल्यै पनि जनताले सडकको निम्ति सास्ती भोग्न नपर्ने । के जनताको लागि सेवा गर्नु गलत हो ?
खप्तडछान्ना ( ७ बझाङ )